Guraandhalaa 12, 2020
Amerikaan filannoo pirezidaantummaa bara 2020 nama dorgomsiifachuutti jirti dorgommii New Hampshire Berni Sandersitti moo'e
Amerikaan pirezidaantii filachuuf nama itti wal dorgomsiifachuutti jirti. Tiraampi marroo lammeessoof dorgoma. Demokriaatotii Tiraampi irraa hujii tana buufachuuf itti baafatan.
Filannoo amma itti jiraniin Primary jedhan. Godinii 50nuu Primary tana qaba. Godinii Iowa ammoo dorogmmii tanaan Caucus jette.Namii tana moo’e paartii isaa fulaa bu’ee Tiraampiin walti gadi dhiisan.
Akka kanaan dorogmmii New Hampshire Senator Bernii Sadersiitti moo’e.Goinda akkanaa 48 irraa maranii dorgoman. Iowmaan torbaan dabre fixate.
Namii kun ganna 6n durallee dorogmee hin taaneef.Dorgommii New Hampshire ta edaa ammoo iswatti moo’e.
"Tiraampi moo’uu qofaaf hin dorgomnu.Biyya tana durattiin deemuuf dorgoma. Akka gabayaan addunyaa humna qabaattu dorgomna. Dhaabbilee inshuraansii dhaabbilee qorsaa, dhaabbilee waraanaa fi waan hedduu jabeessuuf tana jenne.”
Namii isatti aane Primary New Hampshire moo’e bulchaa South Bend, Indiyaanaa Pete Budjej.Torbaan dabre ammoo Primary Iowa moo’e. Buttigieg gaafa moo’e sun paartii demokriaatota walti rara jedhee biyyatti himate.
Filannoo Primary New Hampshire sadeessoo namii tahe ammoo Senator Minisootaa Amy Klobuchar.
"Wannii Tiraampi yaaddessee hirriiba dhowwuutit jiru warra umrii jidduu-galleessa irra jiru.Warra inni yaamee maqaa balleessaa bahe fa fi warra innii xureessaa bahe.Jara kanatti Sadaasaa dhufu pirezdiaantii filate jedhee hirriira dhaba.”
Amerikaan gara ganna 10n duubatti pirezixaii filatti. Pirezidaantiin Amerikaa ganna 8 caalaa biyya bulchuu hin dandahu.